Baịbụl A Na-egere Egere: Gaa na JW.ORG gere Baịbụl a gụrụ agụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Thai Tigrinya Turkish Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Vezo Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Baịbụl A Na-egere Egere Ọtụtụ Narị Mmadụ So Gụọ
“Ọ na-eme ka uche mmadụ dịrị n’ihe a na-agụ, meekwa ka onye ahụ chebara ya echiche.”
“Ọ na-eme ka ọ dị onye na-ege ha ka ọ̀ nọ mgbe ihe a na-agụ na-eme.”
“Ọ na-atọ m ka shụga. Ọ na-eme ka m kwetasikwuo ike na ihe ndị m na-agụ na Baịbụl mere eme.”
Ihe ndị a e kwuru bụ ihe ndị gerela akwụkwọ Matiu a na-egere egere kwuru. Ọ dị n’asụsụ Bekee na jw.org.
Ọ bụ n’afọ 1978 ka Ndịàmà Jehova malitere iwepụta Baịbụl a na-egere egere. Ka oge na-aga, a gụrụ akwụkwọ niile dị na Baịbụl n’ozuzu ya ma ọ bụkwanụ akwụkwọ ya ụfọdụ n’asụsụ iri abụọ.
Ihe mere e ji na-agụgharị Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ bụ na e degharịrị Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ n’afọ 2013. Ná nke ochie ahụ, ọ bụ mmadụ atọ gụrụ ya. Ma, na nke ọhụrụ a, a bịa n’ihe karịrị otu puku mmadụ kwuru okwu na Baịbụl, otu onye na-agụ ihe otu onye kwuru, onye ọzọ agụọ ihe onye ọzọ kwuru.
Ihe mere e ji kpọta ọtụtụ ndị ka ha soro gụọ Baịbụl a bụ na ọ ga-eme ka ọ dị ndị na-ege ya ka hà nọ mgbe ihe a na-agụ na-eme. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị akụkọ Baịbụl a na-egere ege n’ihi na ị gaghị anụ ụda egwú ma ọ bụ ụda ihe ndị ọzọ na ha, ma a gụrụ ha ka ndị na-ege ha mata na ihe ndị ha na-egere mere eme.
Baịbụl a ọtụtụ ndị so na-agụ chọrọ ka a hazie otú a ga-esi agụ ya ahazie. Tupu a malite ịgụ ya, ndị na-eme nchọpụta ga-achọpụta onye kwuru ihe ahụ a chọrọ ịgụ, ihe ihe ahụ a chọrọ ịgụ pụtara, nakwa otú a ga-esi agụ ya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na e nwere ihe onyeozi kwuru n’akụkọ a chọrọ ịgụ, ma a kpọghị onyeozi ahụ aha, ònye kwesịrị ịgụ ya? A bịa n’ebe mmadụ rụrụ ụka, e nwere ike ikwu na onye ahụ bụ Tọmọs, e nwee ebe mmadụ kwuru okwu n’echeghị echiche, e nwere ike ịsị na onye ahụ bụ Pita.
Ihe a na-echebakwara echiche tupu e kenye mmadụ ihe ọ ga-agụ bụ afọ ndụ onye kwuru ihe ahụ na Baịbụl. Dị ka ihe atụ, a chọọ ịgụ ihe Jọn onyeozi kwuru mgbe ọ bụ okorobịa, onye ga-agụ ihe ndị o kwuru ga-abụkwa nwa okorobịa. A chọọkwanụ ịgụ ihe Jọn onyeozi kwuru mgbe ọ katarala ahụ́, onye ga-agụ ya ga-abụ onye katarala ahụ́.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ inweta ndị na-agụ ihe nke ọma. E nwetara ọtụtụ n’ime ha n’alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’Amerịka. Tupu a họpụta ha iso gụọ ihe, a na-enye onye nke ọ bụla n’ime ha otu paragraf dị na Teta! ma gwa ya ka ọ mụọ ya nke ọma. Ọ mụchaa ya, ya abịa gụọ ya n’ihu ndị na-ahụ maka ịgụ ihe ka ha nwee ike ịma ma ò ruru eru iso gụọ ihe. A na-asịkwa ha gụọ ebe e ji iwe kwuo okwu na Baịbụl, ebe onye obi na-adịghị mma kwuru okwu, ebe mmadụ ji obi ụtọ kwuo okwu, nakwa ebe onye dara mbà n’obi kwuru okwu. Ihe ndị ahụ a na-ekenye ha ka ha gụọ na-eme ka a mata ndị na-agụ ihe nke ọma, nakwa ebe ndị ha ga-akacha agụta.
E nye ndị ga-agụ ihe ihe ndị ha ga-agụ, ha na-abịa n’otu n’ime ebe anyị na-etinye ihe na teepụ dị́ na Bruklin, Patasịn, ma ọ bụ na Wọlkil ka e tinye ihe ha ga-agụ na teepụ. Onye na-eduzi ndị na-agụ ihe na-agbalị ịhụ na a gụrụ ha otú e kwesịrị isi agụ ha. Ọ na-ejide akwụkwọ e dere ihe a na-agụ, bụ́ nke kwuru otú e kwesịrị isi akwụsịtụ mgbe a na-agụ ihe nakwa otú e kwesịrị isi emesi okwu ike n’ihe a na-agụ, elere anya. Onye na-agụ ihe na-ejidekwa otu, jiri ya na-agụ ihe. Onye na-eduzi ndị na-agụ ihe ga-elere anya na Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke ochie a gụrụla agụ iji mara ma ndị na-agụ ihe hà gụtara ha.
E nwee ebe ụfọdụ na-adịchaghị mma n’ihe ndị ahụ e tinyere na teepụ, a na-anọ ebe ahụ mezie ha. E nwee ebe onye na-agụ ihe na-agụtachaghị, ọ na-agụgharị ya ugboro ugboro. Ọ gụchaa, a na-ewere okwu ma ọ bụ ahịrị okwu ndị ọ gụtara jikọta ọnụ ka ha bụrụ ịgba.
Anyị amaghị oge ọ ga-ewe iji gụcha ma tinye Baịbụl Nsụghrị Ụwa Ọhụrụ nke afọ 2013 e degharịrị edegharị na teepụ. Ọ bụrụ na a gụchaa otu akwụkwọ dị na Baịbụl, a ga-etinye ya na jw.org, seekwa ihe yiri ihe e ji ege egwú n’akụkụ aha akwụkwọ Baịbụl ahụ a gụcharala. Ha ga-adị n’okpuru ebe e dere “Akwụkwọ Ndị Dị na Baịbụl.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Baịbụl A Na-egere Egere Ọtụtụ Narị Mmadụ So Gụọ